Chii chinonzi simba batsira bhasikoro? | ebike Shuangye
musha Blog nhau Chii chinonzi simba batsira bhasikoro?
Zuva ： 2020-07-15 Zvikamu:nhau Views: 2,678 maonero
A simba rakabatsira bhasikoro kana bhasikoro remagetsi, ipedal kutenderera ine mota yemagetsi yakasungirirwa kubatsira mutasvi. Iyo yakasungirirwa mota yemagetsi inogona kupa rubatsiro uye mapedhi anogona kunge ari iwo makuru nzira yekufambisa. Kana iwe uchida kuchengetedza yakawanda nguva, rimwe simba rakabatsirwa bhasikoro rakaisirwa chigunwe, ingo chinja kana kudzvanya throttle kuti unakirwe yakachena magetsi kukwira rwendo.
Chii chinonzi rubal chinobatsira?
Pedal assist yakajairika kune simba rekubatsira bhasikoro, zvakare chimwe chezvinhu zvakakosha zveyese e-bhasikoro. Pedal assist ndeimwe yekushandisa modes pasimba kubatsira bhasikoro rakagadzirirwa kubatidza e-bhasikoro mota kuti ikubatsire iwe kufamba. Mazhinji e-mabhasikoro ane chinongedzo-chinobatsira chinenge chakavakirwa mune icho chinokutendera kuti umise mota nekupuruzira pane kushandisa kumonyoroka kana kubhabhadzira chigunwe. Kubatsira kuri nyore. Panzvimbo pekumonyanisa kana kumanikidza kubhowa kuti umise yako e-bhasikoro mota, ingo tanga kukwirisa uye mota ichasimudza otomatiki. Kazhinji, iyo yekumhanyisa sensor kana torque sensor yakaiswa mune yepazasi bracket yemagetsi anobatsira bhasikoro - ekisero kana shaft inobatanidza iwo maviri emakumbo uye anovabvumidza kutenderera. Kugadzirirwa pane e-bhasikoro kuratidza kunotaridza kuti ingani simba iyo mota ichashandisa kukubatsira iwe.
Speed ​​sensor VS Torque sensor
Kureruka uye kufungidzira ndizvo zvakanakira yekumhanya sensor pedal kubatsira. Paunotanga kukwirisa, mota inosimuka, uye iwe unogona kuseta mangani emagetsi emagetsi aunoda kukubatsira iwe uchifamba. Semuenzaniso, Shuangye bhasikoro remagetsi rine 6 Pedal Rubatsiro Matanho, kubva pa0 kusvika pamatanho mashanu. Paunofamba, iwe unonzwa kuti hausi kuwedzera chero simba pakukwidza - mota irikuita basa rese. Kana iwe uchida kupa simba regumbo uye kuwana kurovedza muviri, unogona kudzikisa chinongedzo chekubatsira chikamu pane yako e-bhasikoro kuratidzwa kuburikidza bhatani.
Torque sensors inovimbisa kuti uchave nekurovedza muviri pane yako e-bhasikoro. Iyo torque sensor inongomutsa mota sekureba sekunge iwe uri kuisa kumanikidza pane emakumbo. Iyo mota ichaburitsa yakafanana yesimba 1: 1 simba shanduko kuenda e-bhasikoro zvinoenderana nekumhanya kwetsoka. Nekudaro, iwe unofanirwa kuyera iro danho remagetsi kubatsira pane kuwanda kwerovedzo iwe yaunoda kuwana kubva pakubata.
Misiyano pakati pesimba yakabatsira bhasikoro uye mudhudhudhu
Bike yakabatsira magetsi ibhasikoro rine mota yemagetsi rakasungirwa kubatsira mutasvi. Pakutanga kutarisa imwe mudhudhudhu nemakumbo anoratidzika akafanana chaizvo nesimba rakabatsira bhasikoro. Asi mizhinji yemidhudhudhudhudhu haina kuisa pedal. Chaizvoizvo, simba batsira bhasiketi uye mudhudhudhu vane zvakawanda mutsauko pane zvimwe zvinhu, sekumhanya, pedal crank kupatsanura, uremu, zvigaro chinzvimbo, chigaro chigaro uye gearing.
Kana mota yemavhiri maviri ine chigaro chinogadziriswa uye dzakawanda giya kuti zvive nyore kufamba, pamwe nebhatiri pack uye mota yemagetsi kubatsira mutasvi. Zvadaro, iri simba rakabatsira bhasikoro.
Kana mota yemavhiri maviri yakakodzerwa nemota yekubatanidza yemoto kana ma pedals haisi iyo nzira huru yekukurudzira. Zviri pachena kuti ivo havasi magetsi anobatsira bhasikoro, vaigona kuda mudhudhudhu kana mota yemagetsi.
Ichi chinyorwa chinokutaurira chii chinonzi simba bike bhasiki kubva pachinhu chekubatsira pedal uye kuenzanisa kwe mudhudhudhu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda pamusoro pesimba rinobatsira bhasikoro, unogona kutarisa zvinyorwa zvekare kana kushanyira edu Official Website, zvakare inogona kutisiyira meseji pazasi.
Tags:simba batsira bhasikoro simba batsira bhasiketi
Prev: Maitiro Ekuchengetera Emagetsi Bike Bhatiri Hutano
Next: Akakurumbira 3 E Mabhasikoro Ari Kutengeswa - Sangana Nekuda Kwako